Kedu otu esi meziwanye Amazon SEO?
Dịka data nchịkọta akụkọ, ihe karịrị 55% nke ndị ọkacha mmasị na-ahọrọ ịzụta ihe n'ịntanetị, gbanwee ihu ahịa Amazon iji chọta ihe ha chọrọ. Ọ bụ ebe e dere maka ndị ahịa na oge anyị. Ndị ọrụ na-elele ikpo okwu a na mbụ n'ihi ọnụ ọgụgụ nke ihe doro anya dịka aha ọma nke weebụsaịtị a, ikike iji tụnyere ọnụahịa ma chọpụta ọnụahịa kachasị mma na weebụ, ikike ịgụ akwụkwọ ntanetị ndị ahịa, na na. Ọzọkwa, ndị ọrụ maara na n'ime nsogbu ahụmahụ na-ezighị ezi na n'elu ikpo okwu a, ha ga-enweta ụgwọ zuru oke. Njirimara ndị a na-eme ka Amazon baa uru maka ma ndị zụrụ ma ndị na ere ákwà. Ọ bụ ya mere ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ọnụ ọgụgụ kasịnụ nke ndị ahịa gị, Amazon bụ ihe kachasị mma maka nzube ndị a - piccoli ambienti. Iji nweta ihe kachasị site nchịkọta gị na nzụlite azụmahịa a, ị ga-achọ ime ụfọdụ search engine optimization tactics to show your products and business.
Ejiri isiokwu a iji nyere gị aka melite Amazon SEO ma mepụta ngwaahịa gị na nnukwu ụlọ ahịa ịntanetị.
Ụkpụrụ nke ngwaahịa ogo na Amazon
E nwere ọtụtụ ihe dị mkpa dị mkpa ihe ịkwesịrị itinye n'ime ihe iji melite gị Amazon peeji nke SEO. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ndepụta ngwaahịa kachasị mma, ị ga-achọ ịma akụkụ ndị ịchọrọ ilekwasị anya.
Dị ka Amazon A9 ogo algorithm, onye na-achọ ahịa ga-ahụ ihe ndị na-esonụ mgbe ịchọrọ ajụjụ:
ederede na mkpado;
nnweta ngwaahịa (nke dị ugbu a ma ọ bụ na ngwaahịa);
akụkọ ihe mere eme;
nyocha ndị ahịa.
Akụkụ niile a nwere ike kewaa n'ime ihe omume na ihe ndị dị mkpa. Akụkụ mbụ nke ihe ndị ahụ na-egosi ihe ndị Amazon na-eji emepụta ngwaahịa dabere na ego ole ha ga-eme site n'ime otú ahụ. Ihe ndị dị mkpa bụ ihe dị mkpa ngwaahịa nwere mgbe ịchọta onye ọrụ.
Ka anyị buru ụzọ tụlee ihe ndị na-arụ ọrụ arụmọrụ. Nke mbụ, ọ bụ ọnụego mgbanwe. Mgbanwe dị iche iche bụ ihe doro anya Amazon. Ị nwere ike iji ọtụtụ ụzọ dị irè iji gosi Amazon ngwaahịa gị na-agbanwe nke ọma. Mgbe ọ na-abịa ịchọta nkọwa doro anya nke mgbanwe, Amazon bụ nnọọ aghụghọ. Ị nwere ike ịhụ usoro dị iche iche dị ka nkeji na nnọkọ, ma ezughị data iji chịkwaa ọnọdụ niile.
Ị nwere ike ịchọta nkọwa mkparịta ụka gị site na ịga na Akụkọ, mgbe ahụ Business Reports, Ahịa ahịa zuru oke na n'ikpeazụ Traffic. N'ebe a, ị ga-achọ ịlele ọnụọgụ oge ma ọ bụ na okwu ndị ọzọ ọnụ ọgụgụ nke nnọkọ.
Iji meziwanye amaokwu Amazon gị, ị ga-achọ ịmepụta igbe ịzụta zụrụ pasent. Dị ka ọmụmaatụ, mpaghara gị nyere iwu maka ịzụta igbe ga-egosi Amazon na ị na-emegharị ọzọ.
Ị nwere ike imetụta ogo arụmọrụ site na njikarịcha foto gị na mmelite ntanetịahịa ngwaahịa.
Ugbu a, ka anyị lee anya na ihe ndị dị na Amazon bụ ndị dabere na mkpa. Ihe ndị dị mkpa bụ ihe gbasara njirimara ọchụchọ na ozi nke dị na ibe.
Iji mee ka ibe gị dịkwuo mkpa na njụ-ajụjụ nke onye ọrụ, ịkwesịrị ịkwalite aha nchịkọta ngwaahịa gị. Ịkwesịrị ịsonye isiokwu ndị kachasị mkpa na ndị a na-echebara aha gị na nkọwa gị iji nyere ndị ahịa ịchọtara aka ịchọta ngwaahịa gị na ibe.
Ihe ndị dị mkpa ịchọrọ itinye na aha gị bụ ngwaahịa ngwaahịa, nkọwa dị mkpirikpi (ụcha, nha, ihe onwunwe, nnukwu), akara nke ngwaahịa ahụ ma mepụtara ngwaahịa a (ụmụaka, ndị okenye, wdg.)